Izilima zibonakala ngokungagqoki izifonyo | Scrolla Izindaba
Abaphikisana nemithetho yokugqoka izifonyo eMelika bangahle babukeke njengezinhlanya.
Kepha empeleni bangabasekeli abashisekayo bakaMengameli uDonald Trump.
Babambelele enkululekweni yabo yokwenza abakuthandayo – abanandaba nokuthi ngubani ogulayo noma oshonayo.
UTrump akuvamile ukuthi afake isifonyo futhi usegqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bangalaleli imithetho yokugqoka izifonyo ezitolo nakwezinye izindawo zomphakathi.
Ubamba imihlangano emikhulu yangaphakathi lapho kungekho muntu ofake isifonyo noma oqhelelene nomunye.
Kuleli sonto uphikise inkulumo yesikhulu esiphezulu kwezempilo ngenxa yokuthi uthe abantu mabagqoke izifonyo.
Kepha njengoba laba abaphikisana nemithetho yokugqoka izifonyo beqhubeka nokusabalala, kanjalo ne-coronavirus iyabhebhetheka.
Isibalo sabantu abashone eMelika ngenxa ye-Covid-19 sesidlule kwi-200,000.